Ny mpanjanaka dia nahatsapa izany ka ny fihavanana sy ny fahendrena malagasy no nosomparany voalohany ahazahoany mijoro eo anatrehan’ny malagasy voazarazara.
Ny Malagasy hono tsy vaky volo…
“Aza ravana ny firaisam-pirenena”, hoy ireto vahoaka malagasy liam-pandrosoana sy fandriam-pahalemana. Te-handroso ara-toetsaina. Ny saina , io hono no mitondra ny vatana mantsy. Efa ho dimampolo taona izao no nahaleo tena ny malagasy kanefa re ombieny ombieny etsy sy eroa ny hoe:
“-mba ovao amin’izay ilay toe-tsaina é!”.
Efa mahaleo tena indray ve vao hitsipozipozy?
Eny lasa nisara-bazana tokoa satria nisy “harena tsy ihavanana”; lasa nifandrafy satria samy te-hanana ny maha izy azy avy, hany ka lasa nifanoto toa ny omby anaty vala. Nifandaka toa ny valala an-karona.
Hita tao ny “ady seza na tao amin’ny fitondrana na tany am-piangonana. Tao ihany koa ny “ady saranga”. Velona indray ny hoe :”-zahay Andriana, ianareo andevo”. Fa ny tena mampalahelo dia ny adim-poko. Holatra navelan’ny fanjanahan-tany. Henatr’i Madagasikara. Ary mampalahelo fa io resaka “foko” io dia tody hatraty am-pita-dranomasina.
Ny sofiko no nahare ny : “ ’Nareo Merina ireo... “...teo koa ny :”izahay tsy mila Betsileo”.
...sy ny “...’Zaho tsy ho any fa betsaka Tanindrana any”....
Atao akory àry ?
Tsy ny fihaviana no maha olona fa ny FANAHY. Marina fa zarazarain’ny fihaviana isika Malagasy fa ny Fanahy no iraisana... Mahaleo tena isika ka nefa tsy mahay miara-miaina...Ka rahoviana vao hisy firaisam-pirenena?
Hovana hono ny toe-tsaina. Hovana tahaka ny an’ny Amerikana sa toa ny an’ny Frantsay?...
Aza mandeha lavitra loatra re. Ny toe-tsaina , aoka tsy hovana fa avereno fotsiny izay efa nolovaina tamin’ny razan-tsika dia tsy inona fa ny “fitandroana ny fihavanana”. “Soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra àry fo miara-mitempo”: ireo no tsiambaratelon’ny Firaisam-pirenena ka aza ravàna.